इन्द्रेणीका गायिका कल्पनालाई अ र्को ब’ज्रपात, दाईले सधैका लागि संसार छा’डेर जानु भो! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > इन्द्रेणीका गायिका कल्पनालाई अ र्को ब’ज्रपात, दाईले सधैका लागि संसार छा’डेर जानु भो! (भिडियो सहित)
इन्द्रेणीका गायिका कल्पनालाई अ र्को ब’ज्रपात, दाईले सधैका लागि संसार छा’डेर जानु भो! (भिडियो सहित)
admin March 7, 2020 भिडियो, समाज	0
यस्तो कहानी हामीले कमै देखेका छौ देखे पनि चलचित्रमा देखेका छौ तर एउटा यस्तो सत्य घटना घट्यो गायिका कल्पना दाहालको जीवनमा। सिन्धुपाल्चोककि गायिका कल्पना दाहाल काठे दोहोरी महोत्सवमा भाग लिदै फाइनलमा पुग्दै थिईन अकस्मात उनलाई फोन आयो,फोनमा भनियो’तपाई अर्जुनको को हो? कल्पनाले भनिन ‘म अर्जुनको बहिनी हो किन र?”उतर आयो “अर्जुनको डोजर दुर्घटनामा मृ’त्यु भयो”।एता गीत गाउदै गरेकी कल्पना कहा सम्हालिन सक्छिन र।
कल्पना फाइनलमा पगे संगै उनि उक्त प्रतियोगिताकी पहिलो भएर ३ लाख त जितिन तर उनको दाई अर्जुन कहिल्यै न फर्कने गरि यो संसारबाट टाढा भयो। कल्पना आफुलाई सम्हाल्दै गीत गाउन पुगेपछि जज देखि आयोजक सबै चकित थिए धेरैले त भने ‘तिमी एक शक्तिशाली र शहनसिल नारि रैछौ सलाम छ आज यो जित तिम्रै दाईको भएको हो’। कल्पना संगको यो भिडियो हेर्नुहोस उनि दोहोरी खेल्दा खेल्दै बेहोस् हुन पुगिन।
काठमाण्डाै आउदै गरेकाे माइक्रो बिहान अनियन्त्रित भएर घरभित्रै छिरेपछि…